Oct 26, 2021 HopeComment on အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေက လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးနိုင်လဲ ?
အိမမြှေးအလှမှေး တိရိဈဆာနလြေးတှကေ လူတှကေို အကွိုးပှုလာတာ လှနခြဲ့တဲ့ နှဈပေါငြးမွားစှာကတညြးပါ။ အပေါငြးအဖောအြဖှဈရှိလာပေးတဲ့ အိမမြှေးတိရဈဆာနတြှကှေောင့ြ လူတှရေဲ့ စိတကြို ပွောရြှှငကြှညနြူးစတောကတော့ ငှငြးလို့မရတဲ့အခကွပြါ။ ခှေးလေးတှေ၊ ကှောငလြေးတှေ၊ ငှကကြလေးတှေ၊
Oct 26, 2021 HopeComment on လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေကို လူငယ်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်လဲ???
အခုလို Covid 19 ကပ်ရောဂါကြီးအပြင် အခြေအနေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် ကျောင်းတွေပိတ်၊ အလုပ်တွေပိတ်ပြီး မနက်ဖြန်တွေဟာမသေချာတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာ လူငယ်တွေရဲ့ဘ၀ဟာပိုမိုခက်ခဲလာပြီး အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း အထီးကျန်လာကာ မိမိကိုယ်ကိုအလိုမကျတာတွေပါ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။(…ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်အရာကိုမဆို
ဘာစားစား ငန်ငန်လေးမှ၊ ချဉ်ငန်စပ်လေး၊ ငါးပိလေး၊ ငံပြာရည်လေး၊ ဆီဆမ်းဆားဖြူးလေးနဲ့ မှ စားတတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် ” သွေးတိုး ” ရောဂါကလည်း မထူးဆန်းသယောင်ပါပဲ။အခုဆိုလည်း ကိုဗစ်ရောဂါပဲ